Nhau - HDPE Drainpipe Connection Matanho&Hunhu
HDPE Drainpipe Connection Matanho & Hunhu
HDPE drainpipe yekubatanidza inofanirwa kuenda kuburikidza nekugadzirira zvinhu, kucheka, kupisa, kunyunguduka butt welding, kutonhora uye mamwe matanho, hukuru hunhu hwekuita kwakanaka kwemuviri, kunaka kwekusagadzikana, kusimba, kuchinjika, inotevera sumo chaiyo kune "HDPE drainpipe yekubatanidza matanho uye maitiro".
Maitiro ekubatanidza HDPE drainpipes:
1. Kugadzirira kwezvinhu: isa pombi kana pombi fittings flat pamushini wekugadzira, kucheka mvumo ye10-20mm.
2. Kucheka: iyo idiki iyo dislocation, zviri nani.Kutsauka hakufaniri kudarika 10% yemadziro ukobvu.Zvikasadaro, iyo docking mhando ichakanganiswa.
3. Kupisa: tembiricha yebutt inowanzoita 210-230 ℃, nguva yekupisa yendiro yekudziya inosiyana kubva muchando kusvika muzhizha, uye kureba kwekunyunguduka kwemativi maviri ndeye 1-2mm.
4. Fusion butt welding: ndiyo kiyi yewelding.Butt welding process inofanira kugara ichiitwa pasi pekunyunguduka kwekunyunguduka, uye hupamhi hwekupeta parutivi hunofanira kuva 2-4mm.
5. Kutonhora: chengetedza docking pressure isingashanduki, rega iyo interface inotonhora zvishoma nezvishoma, nguva yekutonhora inotarisana neruoko ruchimanikidza kuoma uye pasina kupisa kwekunzwa.
6. Kupedzwa kwekuita docking: Mushure mekutonhora, sunungura slip, bvisa docking machine, uye gadzirira iyo inotevera interface yekubatanidza zvakare.
HDPE drainpipe zvinhu:
HDPE drainpipe inonyanya kugadzirwa nepolyethylene, inogona kuve nechokwadi chekusimba kwepombi, asi zvakare ine kuchinjika uye inokambaira kuramba.Iine kushanda kwakanaka mukupisa kunyunguduka kubatana uye kunobatsira pakugadzwa nekuvakwa kwepombi.
2. Corrosion resistance iri nani
Munzvimbo dzemahombekombe, mvura yepasi pevhu yakakwira zvakanyanya, nyika yehunyoro yakakura, zvakare inotora chubhu yesimbi isina musono iri nyore kuita ngura, uye hupenyu hupfupi, uye mapaipi e polyethylene HDPE anonyanya kushandiswa sechinhu, kuramba ngura. chemakemikari zvinhu, pasina chero chekuchengetedza kurapwa, zvakare haikurudzire kukura kwealgae, izvi zvakare zvichave zvakanyanya hupenyu hwesevhisi.
3. Kusimba kwakanaka uye kuchinjika
HDPE pombi ane yakakwirira kuomarara, uye elongation panguva zororo zvakare yakakura, saka kune avo extruded kusaenzana kugarwa uye dislocation adaptability ane simba, kudengenyeka kwepasi zvakare nani, kuitira kuti pombi hurongwa hwakasimba uye hwakavimbika.
4. Simba rekuyerera kwakasimba
Nemhaka yokuti rusvingo rwepombi rwakatsetseka uye kushorwa kuduku, kunogona kuita kuti mvura iende nokukurumidza uye kuyerera kwakakura.Kuenzaniswa nemamwe mapaipi, simba rekutenderera rakasimba kwazvo uye mutengo unogona kuchengetwa.
5. Kuvaka kwakanaka
HDPE pombi huremu hwakareruka, kubata, kuisirwa kuri nyore, uye kushandiswa kwekupisa kunyunguduka kwekubatanidza chisimbiso kuri nani, kwakavimbika kwazvo.
6. Chisimbiso chakanaka
Iyo welding nzira inogona kuvimbisa kunaka kweiyo interface, kuona kubatanidzwa kwejoinhi uye pombi, uye simba uye kuputika simba reiyo interface yakakwirira kupfuura pombi pachayo, yakachengeteka uye yakavimbika.
Nguva yekutumira: May-20-2022